Vaovao - Olana tokony hialana amin'ny famokarana lafaoro sokay tia tontolo iainana
1) Ny haben'ny vatosokay dia lehibe loatra: ny hafainganam-pandehan'ny kajy amin'ny vatosokay dia miankina amin'ny mari-pana izay hahitana ny haben'ny zana-kazo misy sokay miaraka amin'ny ambonin'ny vatosokay. Amin'ny maripana iray dia miankina amin'ny haben'ny vatosokay ny tahan'ny kalsina amin'ny vatosokay. Ny haben'ny poti-javatra dia miadana kokoa ny hafainganam-pandehan'ny fanaovana kajy. Satria kely kokoa noho ny vatosokay ny fitarihana hafanana, dia vao mainka sarotra aminy izany ny hafanana hiditra ao anaty vato rehefa mihalehibe ny hatevin'ny sokay, ary mihena ny hafainganam-pandehan'ny fikajiana. Noho izany dia mitana sandwich ny vato lehibe vita amin'ny vatosokay, izay no tena antony fandoroana sokay. ny lafaoro sokina dia tokony fehezina amin'ny 40-80mm, ary ny haben'ny lafaoro dia afaka avela ho 50-150mm.
2) Sombin-tsolika kely na sandan'ny kalorific solika ambany: ny tahan'ny solika lavenona mahavariana ny tontolo iainana dia misy ifandraisany amin'ny fahombiazan'ny teknikan'ny laona. Amin'izao fotoana izao dia nidina ambany * 125 kg ny arintany ampiasaina amin'ny fandoroana sokay iray taonina amin'ny lafaoro sokay vaovao mahasoa amin'ny tontolo iainana. Amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 5500 kcal ny sandan'ny kalina azo avy amin'ny saribao vita amin'ny tanimanga mahavariana ny tontolo iainana. Tokony hofehezina ny haben'ny solika, ary tokony ampiana rano rehefa ampiasaina ny arina.
3) Famatsian-drivotra tsy mitombina: ny kilaometatra fiarovana ny tontolo iainana ho setrin'ny famokarana vato sokay dia miankina amin'ny fandoroana hafanana avo lenta, ary ny fandoroana solika mila oxygen (rivotra), ny fandoroana solika rehetra dia tokony hanana fepetra telo ilaina amin'ny solika, oxygen, velaran-tany misy loharanom-pahefana. , ary ny rivotra mifofofofo sy ny afo, ny afo ankoatry ny arintany sy vatosokay amin'ny ampahany iray hanatevin-daharana azy, mety ho an'ny rivotra ihany koa ny zava-dehibe indrindra, ny faritra fiarovana ny tontolo iainana momba ny haavon'ny rivotra eo an-toerana dia manana toerana kely sy be rivotra ny arina. mirehitra feno, mari-pana ambony, rivotra may kely faritra dia tsy ampy, tsy ampy valiny, vatosokay ShengShao tranga. Mba hahatonga ny famatsian-drivotra ho ara-dalàna, amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haavon'ny famatsiana ny rivotra sy ny fonosana simulateur an'ny solosaina, ny tsindry rivotra dia afaka miditra ao Ampahany amin'ny lafaoro sokay mahasoa amin'ny tontolo iainana ary milanjalanja, ary ny solika dia azo dorana mirindra. Ny fiarovana ny tontolo iainana ambanin'ny laon-javamaniry sokay dia vokatry ny fitsinjaran-drivotra tsy mandeha amin'ny laoniny ao anaty lafaoro, ary ny fizarana fizarana dia tsy mitombina mba hanehoana ny lesoka amin'ny firafitry ny cowl simulation computer, ny orinasako mampiditra teknolojia, amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanahafana ny solosaina hanamboarana ny fiovan'ny saha mikoriana manodidina ny hood, fandinihana ny valim-panafody hita eo an-tampon'ny "air zone" misy ny airflow hood. Amin'ny alàlan'ny fametrahana fantson-drivotra manokana eo an-tampon'ny hood dia misokatra ny airflow afovoany miakatra ary esorina ny "faritra maty" amin'ny onjam-peo, mba hialana amin'ny trangan-javatra may vokatry ny fitsentsenana afovoany. Aorian'ny fanovana ny firafitry ny hood, ny fizarana ny onjam-peo ao amin'ny lafaoro sokay dia mitovy kokoa, ary ny hetsika sokay novokarin'ny hood dia nitombo mihoatra ny 15% raha oharina amin'ny asa sokay tsy nohavaozina.
4) Mihoatra ny fandoroana: ny kalitaon'ny quicklime, etsy an-daniny mba hijerena ny atin'ny kalsioma oksida, manezioma oksida, etsy ankilany mba hahitana ny taham-pahamaizana ny quicklime, ny fandoroana manta dia ampahany amin'ny vatosokay tsy simba tanteraka, Ny fandoroana azy dia famaritana vatosokay, ka ny fotona mirehitra haingana, fantatra koa amin'ny sokay afo na ny sokay maty. Ity ampahany amin'ny hetsika quicklime ity dia ambany, sarotra ravana, vatosokay tsotra, ny maripana fandoroana mahazatra dia l000-1200 ℃, mazàna mihoatra ny sokay may avo loatra ny maripana mandrehitra, elaela, vaky ny tampony na akorany fitaratra, miharihary ny fihenan'ny volony, may ny loko miloko mainty, nitombo ny fahafahan'ny sakana. Ireo antony mahatonga ny fandoroana be loatra: diniho aloha sao dia lehibe loatra ny tahan'ny lasantsy, tokony ahitsy amin'ny antonony ny fikajiana, ny fangaronan'ny arina dia tokony handinika tsara ny kalitaon'ny arina, ankoatry ny fanitsiana ny famatsian-drivotra sahaza azy. n nalamina tamin'ny fomba lehibe indrindra amin'ny fanamiana, ny feeder rotary multipoint dia afaka mahatsapa teboka tokana, teboka marobe, mandroso sy miverina mamaly, izay afaka mifehy ny fikorianan'ny fitaovana, ny tahan'ny sakafo, ny lamba solika, ny manao fanamiana solika ary mifangaro tanteraka ny akora, ny fandoroana.
Famoronana Hydroxide Kalsioma, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide,